मलेसिया जानेका लागि दशैँ लगत्तै काइदाकाे सम्झौता हुँदै
२०७५ असोज २८ आइतबार, काठमाडौं । सरकारले मलेसियामा सरकारी प्रणालीमार्फत कामदार पठाउन दशैँ लगत्तै समझदारी गर्ने भएको छ । ... बाँकी अंश»
सवल कांग्रेस जनताको चाहना –बानिया
२०७५ असोज २४ बुधबार, न्यूयोर्क । नेपाली कॉग्रेसका काठमाडौं जिल्ला सभापति सवुज बानियाले सवल र सुदृढ कॉग्रेस नेपाली जनताको चाहना भएको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज २२ सोमबार, दक्षिण कोरिया । नेपाली कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय भातृ संगठन जनसम्पर्क समिति दक्षिण कोरीयाले नेपालको समसामहिक घटनाक्रम र पार्टीका गतिबिधि सग सम्बन्धित बिषयमा कार्यकर्ता भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नारायण प्रकाश(एनपी) साउदले सम्बोधन गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
मिर्गौला पीडितलाई पोर्चुगलबाट आर्थिक सहयोग
२०७५ असोज १९ शुक्रबार, लिस्बन। दुबै मिर्गौला फेल भई उपचाररत रहेका नवलपुरका एक युवालाई नवलपुर समाज पोर्चुगलले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । जिल्लाको गैंडाकोट नगरपालिका – ६ का ३३ बर्षीय शक्ति प्रसाद चालिसेको उपचार सहयोगार्थ समाजले आर्थिक सहयोग गरेको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज १८ बिहिबार, पिट्सवर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका । संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका नेपाली मधेसी समुदायका युवा उद्यमी, व्यवसायी र विद्यार्थीले सीके राउतविरुद्ध जनकपुरबाट असहयोग आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
अमेरिकाको अदालतमा नेपाल भाषाबाटै बयान दिन पाइने, नेवार समुदाय उत्साहित
२०७५ असोज १६ मंगलबार, अमेरिका । अमेरिकामा नेपाल भाषा (नेवारी भाषा) प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । अमेरिका स्थित ओरेगन राज्यको अदालतले नेपाल भाषा प्रयोग गर्न अधिकार दिएको हो । ... बाँकी अंश»
मलेसियामा १५ लाख भन्दा बढी कमाउने नेपाली मजदूर
२०७५ असोज १३ शनिबार, क्वालालम्पुर, मलेसिया । वैदेशिक रोजगार भन्नासाथ गाह्रो काम, थोरै कमाइ अनि कैयन वेतिथिका भोगाई हुन्छन् भन्ने नकारात्मक धारणा छ तर विभिन्न मुलुकमा पुगेर काम गर्ने कतिपय नेपाली निकै सान, मान र इज्जतका साथ कमाइ मात्र गर्दैनन् अन्य स्वदेशी तथा विदेशीलाई रोजगारीसमेत दिलाउँदै आएका छन् । ... बाँकी अंश»
केपी शर्मा ओलीको अमेरिकामै चर्को विरोध
२०७५ असोज १२ शुक्रबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अमेरिकामै नारा लागेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ७३ औं महासभामा प्रधानमन्त्री ओलीले भित्र सम्बोधन गर्दै गर्दा राष्ट्र संघ भवन बाहिर त्यहाँ रहेका नेपालीले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
नेपाल र बेलायतबीचको शताब्दीयौँदेखिको मित्रता सम्झे प्रधानमन्त्रीद्धय ओली र थेरेसाले
२०७५ असोज ११ बिहिबार, न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग भेटवार्ता गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
नेपालका आठ जिल्लामा निःशुल्क तालिम दिदै युएईका नेपाली व्यवसायी, कहाँ कहिले ?
२०७५ असोज ८ सोमबार, युएई । युएईमा सिकेको ज्ञान, सीप र जिवन उपयोगी कला सिकाउन युएईका नेपाली व्यवसायी ओम उप्रेती पुनः नेपालका आठ जिल्ला पुग्ने भएका छन् । ... बाँकी अंश»
के गर्दैछ राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले ?
२०७५ असोज ८ सोमबार, न्युयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि विश्वसामु प्रस्तुत गर्न, जनताको समृद्धि र खुशीका प्रयासमा थप अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई जनतासँग थप सम्बन्धित बनाउन महासभाको ७३औँ अधिवेशनलाई उपयोग गर्ने उद्देश्य नेपाल सरकारले राखेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई जोगाएर अघि बढ्नुपर्छ – वरिष्ठ नेता पौडेल
२०७५ असोज ५ शुक्रबार, लिस्बन । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरु लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई जोगाएर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
बरिष्ठ नेता पौडेल पोर्चुगलमा
२०७५ असोज ४ बिहिबार, लिस्बन। युरोप भ्रमणमा रहेका नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पोर्चुगल आईपगेका छन् । लग्जेम्बर्ग, बेल्जियम र फ्रान्समा नेपाली जनसम्पर्क समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भई नेता पौडेल बुधबार सांझ पोर्चुगल आईपुगेका हुन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज ३ बुधबार, काठमाडौं । मलेसियाको प्रहरीले विषालु रक्सी बेच्ने सात जनालाई पक्रिएको खबर छ । ... बाँकी अंश»
तामाङ समाज अमेरिकाको अध्यक्षमा सानुमाया तामाङ
२०७५ असोज २ मंगलबार, न्युयोर्क । तामाङ समाज अमेरिकाको प्रथम अधिवेशनबाट श्रीमती सानुमाया तामाङको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको छ । ... बाँकी अंश»
बाबुराम भट्टराईलाई हत्यारा भन्दै अमेरिकामा देखाइयो कालो झण्डा
२०७५ भदौ ३१ आइतबार, टेक्सास । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईलाई अमेरिकामा हत्यारा भन्दै कालोझण्डा देखाइएको छ । ... बाँकी अंश»
बेल्जियममा तीज बिशेष कार्यक्रम भब्यताका साथ सम्पन्न
२०७५ भदौ २७ बुधबार, लिस्बन। नेपाली नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तिजको अवसरमा बेल्जियममा तीज बिशेष कार्यक्रम भब्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । ... बाँकी अंश»
युरोपका कांग्रेस कार्यकर्तालाई कांग्रेस बरिष्ठ नेता पौडेलले सम्बोधन गर्ने
२०७५ भदौ २५ सोमबार, लिस्बन। नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल युरोप भ्रमणमा आउने भएका छन्। ... बाँकी अंश»
बरिष्ठ नेता पौडेलेले युरोपका कांग्रेस कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने
२०७५ भदौ २५ सोमबार, लिस्बन। नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल युरोप भ्रमणमा आउने भएका छन्। युरोपका बिभिन्न मूलुकमा रहेका नेपाली जनसम्पर्क समितिद्धारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न नेता पौडेल युरोप आउन लागेका हुन्। ... बाँकी अंश»
तामाङ समाज अमेरिकाको केन्द्रिय कार्यालयको उद्घाटन
२०७५ भदौ २५ सोमबार, अमेरिका । प्रवासी भूमिमा रहेको नेपाली समुदायले आफ्नो समुदाय र मुक्तिको निम्ति विभिन्न संघ र संस्थाहरूको स्थापना गरे पनि अधिकांश संघ संस्थाका कार्यालयहरू अहिलेसम्म पनि झोलामा मात्रै सिमित रहेको देखिन्छ । ... बाँकी अंश»